Polyphenylene Ether, Hydrazine Hydrate, Dhexdhexaadka cayayaanka - Juxing
Hebei Juxing international trade co., Ltd., Waxaa la aasaasay bishii agoosto 2019, oo ku taal jize functionnal ee dekedda qingdao freetrade, waxay ku dhowdahay wadada tareenka ee hanhuang iyo waddada gobolka ee 311.318, taraafikada ayaa aad isugu habboon, faa'iidada goobta waa mid muuqata.
Waxaan leenahay khadka caalamiga ah ee casriga ah iyo tiknoolajiyada wax soo saarka, nidaamka maaraynta tayada adag.
Hebei Juxing international trade co., Ltd., Waxaa la aasaasay bishii agoosto 2019, oo ku taal jize functionnal oo ka tirsan dekedda qingdao freetrade, waxay ku dhowdahay wadada tareenka ee hanhuang iyo waddada gobolka 311.318, taraafikada ayaa aad isugu habboon, faa'iidada goobta waa iska cadahay .. .
1. Bwe waxay leeyihiin saldhig ballaaran oo wax soo saar ah 5000 + m2.
2. Nidaamka kormeerka tayada oo dhameystiran.
3. Taageerada kooxda R & D ee xirfadlayaasha ah.
4. Kooxda iibinta ee aqoonta wanaagsan leh, adeegga 24/7.
Waxaan leenahay saldhig ballaaran oo wax soo saar oo ah 5000 + m2. Wax soo saarkayagu waa loo dhoofiyaa adduunka oo idil. Ku soo dhowow inaad nala shaqeyso.
Iyada oo laynka sare ee caalamiga ah iyo tiknoolajiyada wax soo saarka, nidaamka maareynta tayada adag
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal R & D ah iyo koox iibin heer sare ah, maalinta oo dhan si aan kuu siino adeegga sugitaanka.
Waxay ku taalaa Qingdao, oo u dhow wadada tareenka iyo wadada weyn ee gobolka, gaadiid ku haboon, faa'iidooyinka goobta oo iska cad.
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansameysa mabda'a tayada marka hore. Wax soo saarkayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..
Abaabulka iftiinka Nidaamka sawir qaadista, oo ay ku jiraan xabagta UV, dahaadhka UV, khad UV, iwm, isbeddelada kiimikada waxay dhacaan ka dib marka la helo ama la nuugo tamarta dibedda, waxayna ku baxdaa xagjirnimo bilaash ah ama cations, sidaasna ku dhaliya falcelinta polymerization. Sawirqaadeyaasha waa walxo soo saari kara f ...
Dhex dhexaadiyaasha dawooyinka Sanadkii 1990 s, wax soosaarka gudaha ee ammonia thiamethoxam oxime acid oo ka badan 20 tartan ganacsi suuqyada ayaa waxaa sii kordheysa tartanka ba'an ee udhaxeeya shirkadaha waxaa sababa hal-abuurnimo farsamo oo markii hore hoos udhacda ilaa hada ammonia maxaliga ah ...
Dhex-dhexaad ah Cayayaanka Cayayaanka ayaa ah hab muhiim u ah wax soo saarka wax soo saarka beeraha, kaas oo door aad u muhiim ah ka ciyaara xakameynta cudurada, cayayaanka iyo haramaha, xasilinta iyo hagaajinta waxsoosaarka dalagga. In kasta oo ay saameeyeen qiimaha wax soo saarka beeraha, aagga abuurka, cimilada, ...